Dare repamusoro harina kutambira chikumbiro cheMDC chekuti risendeke parutivi kurambidzwa kuratidzira kwakaitwa bato iri nemapurisa neChina manheru.
VaMusakwa vati mutemo wePublic Order and Security Act unosungira vanenge varambidzwa nemapurisa kuratidzira kuenda kudare ramejasitiriti kwete kumhanya kudare repamusoro.
Mapurisa akazivisa hutungamiri hweMDC nezuro manheru kuti bato iri raisakwanisa kuenderera mberi nekuratidzira achityira kuti paizoita mhirizhonga mukuratidzira uku mapurisa akati aive mashoma kuti ange achichengetedza vanhu vanga vachifanira kuratidzira.
Zvaturwa nedare zvatsinhirwa nerimwe remagweta eMDC, VaAlec Muchadehama.
Rimwe remagweta aya uye vari mutevedzeri wemutungamiri weMDC, VaTendai Biti, vati havana kufara nemutongo uyu.
Zvisinei nekurambidzwa kwakaitwa MDC kuratidzira muHarare, mutungamiri weMDC, VaNeslon Chamisa, vakurudzira vatsigiri vavo kuti vasunge dzisimbe pavacharatidzira kune dzimwe nzvimbo munyika kubva neMuvhuro vachiti havasi kuzodzoserwa shure nezvaitika muHarare.
VaChamisa vatiwo vachagara pasi nehutungamiri hwebato ravo kuti kuratidzira kune mutsindo kuitike muHarare nedzimwe nzvimbo.
Nyanzvi munyaya dzezvemitemo uye vari mudzidzisi paUniversity of Zimbabwe, Muzvinafundo Lovemore Madhuku, avo vanotungamira bato ravo neNational Constitutional Assembly, iro riri pakati pemapato ezvematongerwo enyika ari kuita nhaurirano nemutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, vati hapana chakanganiswa nedare repamusoro pamutongo waro sezvo vachiti mutemo uri pachena.
Zvichakadai, VaBiti vati havachaenda kumatare kubva iye zvino nezvichemo zvekurambidzwa kuratidzira vachiti havasisina chivimbo nematare.
MDC inoti haisi kufara nemafamsirwo ari kuitwa zvinhu munyika nehurumende yaVaMnangagwa izvo zvainoti kutadza kutonga zvakanaka uku kwave kukonzera kuti veruzhini vanhonge svosve nemuromo.
Bato iri rinotiwo VaMnangagwa havana kusarudzwa zviri pachena musarudzo yemutungamiri wenyika yegore rapera kunyange hazvo komisheni inoona nezvesarudzo yakaziva kuti VaMnangagwa ndivo vakakunda musarudzo iyi izvo zvakatsinhirwa bedare reConstitutional Court.